रत्नपार्कमा आयोजना भयो ‘काग सम्मेलन’ ! — Newskoseli
रत्नपार्कमा आयोजना भयो ‘काग सम्मेलन’ !
प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म मनाइने हिन्दूको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक अर्थात् तिहारको पहिलो दिन कागतिहारमा सोमबार ‘काग सम्मेलन’ आयोजना गरियो ।
राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घले आयोजना गरेको ‘काग सम्मेलन’ मा १ सय ७३ जीव–जनावर तथा चरा–चुरुङ्गीको आवाज निकाल्ने इलामका रमेश दुलाल ‘कागे’ ले कागको स्वर निकालेर कागलाई एकै ठाउँमा भेला पारी रत्नपार्कमा करिव ३ सय वटा काग बोलाएर ‘१५औं काग सम्मेलन’ गरे ।
दुलालले विगत १४ वर्षदेखि तिहारको अवसरमा काग तिहारकै दिन ‘काग सम्मेलन’ गर्दै आएका छन् । ‘मैले संविधान नबन्दा काग बोलाएर नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल घेराउ गरेको छु, भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा भारतीय राजदूतावासको ढोका अगाडि काग बोलाएर विरोध गरेको छु’– दुलालले भने ।
दुलालले कागबाहेक मादल, सनाइँ, सारङ्गी, पियानो, ड्रमसेट, मुर्चुङ्गा, गितारको धुन समेत मुखैले निकाल्छन् । गाई, भैंसी र अन्य चरा–चुरुङ्गीको आवाज पनि उनले दुरुस्तै सुनाउँदै आएका छन् ।
यमपञ्चकको पहिलो दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीमा कागतिहार मनाइन्छ । यस दिन कागलाई मीठा खाने कुरा दिएमा राम्रो समाचार लगिदिने विश्वास गरिन्छ । कागलाई यमदूतका रुपमा मान्ने शास्त्रीय परम्परा रहेको राससले जनाएको छ ।